Ụbọchị My Pet » Ejegharị ụgbọala na gị Pita
site Pet Njem
emelitere ikpeazụ: Jun. 03 2020 | 5 min agụ
Ị maara na ha chọrọ ije n'okporo – otú ọ ga-adị ha?
Jide n'aka gị anu ulo na-ike, ịtọọ oge a nleta na gị pụọ, na-eme ihe ọ bụla gbaa dị ka o kwesịrị. Ụfọdụ Hotels ugbu a chọrọ ka ị na-egosi na-egosi na gị Pita si ogbugba ndekọ bụ ugbu a.
Jide n'aka na-enye ha a ọgwụgwọ nke ejigoro na nne Mmetụta na nkà mmụta ọgwụ dị ka ụfọdụ ebe e nwere ike jupụtara na Akpịrị bụ flea na akọrọ. A ọgwụgwọ nke heartworm na nkà mmụta ọgwụ na-atụ aro ebe anwụnta nwere ike ife efe gị Pita.
Lelee ha onunu: (abịa niile gị Pita stof ke kiet ke otu obere akpa ebe i nwere ike inwe ya)
A leash na olu akwa, a Pita aha mkpado (Olileanya ọ nwere a nọmba ekwentị na ya ebe mmadụ ga-aza, a cell nọmba ekwentị dị ukwuu).
Bottled mmiri, na a mmiri efere (ọkacha mma ụdị nke na-adịghị Nchoputa)
A ọkọnọ nke ha Pita nri, a na efere na ma eleghị anya, a ngaji, na echefukwala emeso
A Pita ahịhịa, ịzụ sachaa ma ọ bụrụ na ị na-aga na-anọkwa otu izu ma ọ bụ karịa
A ụmụaka ji egwuri egwu ma ọ bụ abụọ, na ihe ha na-ehi ụra na.
Echefula ahụike ha onunu:
Ọgwụ ọ bụla
Tuwizas maka wepụ burrs
Anya ihicha tụlee
Nti ntụ ntụ
A Pita mgbochi ngwaọrụ (dị ka nchekwa gị belt nanị maka anu ulo)
Plastic akpa buru mgbe gị Pita.
Nri gị Pita a ìhè nri ọtụtụ awa tupu ị apụ na mgbe ahụ ha maka a ogologo ije tupu ị malite gị na njem.
Ihe mbụ na-aghọta mgbe emeso ụgbọ ala ọrịa bụ na 95% nke ikpe na ọ bụ nchegbu metụtara na ọ bụghị ngagharị yiri. Gị Pita nwere ike ikwu a ụgbọ ala na njem na ịbụ ndị a napụrụ ya nke mbụ ya n'ụlọ, ma ọ bụ njem na pụọ ​​ma ọ bụ ọbụna njọ, na ulo nkita. Ya mere, ya bụghị ihe ijuanya na ụdi ịnyịnya na ụgbọ ala kwesịrị ịkpasu nnọọ ike iche echiche na ụdi ahụ trauma.
Re-omume gị Pita si àgwà kwupụta njem na ụgbọ ala. Chọta a ogige banyere 5-10 nkeji si n'ụlọ, kwesịrị nwere onye ọzọ n'ime ụgbọ ala kwa, dajụọ mmụọ nkịta na dọpụ uche ya si na-agba ịnyịnya. Nọgidenụ na-ya obi ụtọ n'ụzọ nile ka ogige. Mgbe na ogige ime ihe niile na-atọ ụtọ ihe na nkịta hụrụ, ozi kpọtara bọl, na ịchụ na Frisbee. The ọnụnọ na ogige dịghị mkpa ka ịbụ na ogologo…. dị nnọọ ka na-atọ ụtọ dị ka o kwere. Mgbe ahụ ụgbọala na nkịta n'ụlọ obi ya n'ụzọ nile ọzọ na mgbe n'ụlọ ka dị nnọọ nsogbu oge nke nkịta ka i mere na ogige. Rụchaa nnọkọ na ya nri ma ọ bụ a na-emeso ma ọ bụrụ na oge na ọnọdụ ikike.
Ugbu a gị Pita ga-ugbu a akpakọrịta ụgbọ ala njem na fun ugboro.
Njem on efu. Ọ bụ ezi echiche bụghị na-eri nri gị Pita isii na awa asatọ tupu ha amalite a ụzọ njem. Inwe ihe efu afo ga-eme ka ya na o yiri nditop elu, ma ọ bụrụ na ọ na-arịa ọrịa, e nwere ihe oriri ọ bụla na igbo, otú ọ dịkarịa ala na ọ dị mfe ọcha. Inye gị Pita mmiri, Otú ọ dị, ga-iwe ya afo na pụrụ ime ya ka ndị ọzọ mfe.
Ma ọ bụ na-etinye na nkeji iri na ise-tank. Ezie na ụfọdụ anu ulo njem kasị mma na ihe efu afo, ndị ọzọ ga-eche na ndị ọzọ mfe mgbe eri obere nri. Ụfọdụ anu ulo dị nnọọ mkpa a obere nri ha afo aka na ha na-arịa ọrịa.
Were Ugboro fọdụrụ izu. Ezie na ụfọdụ anu ulo nwere ike njem ruo ọtụtụ awa na-enweghị nsogbu, ndị ọzọ na-amalite na-queasy mgbe a kilomita ole na ole. Ga-esi mara gị Pita nlereanya na-akwụsị na ala ọ bụla awa ma ọ bụ abụọ na-a ngwa ngwa ije aka gị Pita ga-esi n'ala ya-ụkwụ azụ. Ọ bụ na-ezi echiche iji wụsa ya a obere mmiri, ebe ọ bụ na o nwere ike na-eche dị mmanya mgbe ọ bụ na ụgbọ ala.
Nwee elu-n'ihu ya. E nwere ihe dị ka ukwuu ije ke n'ihu nke ụgbọ ala dị ka azụ, n'ihi ya, ọ pụrụ inyere gị Pita ọ bụrụ na ị hapụ ya ka nọkwasị na n'ihu oche, ma jide n'aka na ha bụ ndị na a doggy seatbelt ma ọ bụ obere ulo nkita na buckles n'ime oche.
Ịmụbawanye ya horizons. Anu ulo, dị ka ndị mmadụ, ndị na-erughị hà ga-carsick mgbe ha nwere ike na-ele ndị na-agafe ebe ahụ.
Crank ala windo. Ikuku dị mma maka onye ọ bụla na-enwe mmetụta a obere carsick, gụnyere gị nkịta ma ọ bụ cat, ma adịghị emeghe windo ezu otú ọ pụrụ isi gbapụ ma ọ bụ nweta isi ya ụzọ.
Gbalịa a ngagharị potion. Dimenhydrinate (Dramamine) — otu ọgwụ ndị na-Ward ụgbọ ala ọrịa — na-arụ ọrụ maka anu ulo. Ọkara ka nnukwu nkịta e kwesịrị 25 ka 50 milligrams nke Dramamine dịkarịa ala otu awa tupu na-aga, nwamba na obere nkịta ga-enweta banyere 12.5 milligrams. Jide n'aka na-elele na gị pụọ n'ihu enye gị Pita ọ bụla ọgwụ ngwaahịa.
Akwadebe ala ụgbọ ala gị
ike a ebe gị Pita nwere ike nọkwasị n'enweghị ma ka na-ahụ si na windo, na-enwe ike na-metụrụ gị. Ịnọdụ gị n'apata mgbe ị na-akwọ ụgbọala bụ ndị kasị mma echiche. Ha ga-mkpa ohere ha mmiri dị ka nke ọma.
A blanket ma ọ bụ a rọrọ Pita bed ga-adị ukwuu, ya mere ha na-eche n'ụlọ.
Unu echefukwala mgbochi ngwaọrụ, ị na-achọghị ka ha na-efe efe site na windshield ọ bụrụ na ị ga-akwụsị na mberede.
Ọ bụrụ na gị cat na-ejegharị ejegharị na ị na-eme a maka ebe kitty-awụba n'oké osimiri. Behind n'ihu oche na-arụ ọrụ nke ọma na ụfọdụ ụgbọala. Mbụ osụhọde a mpempe plastic (a ahịhịa akpa ga-eme).
Gagharichara Ụzọ Awara Awara
Ohere inweta bụ gị Pita ga-ehi ụra na iri itoolu percent nke oge mgbe ha na-adịghị na-achọ si na windo ma ọ bụ na-anu ulo unu.
Ị mkpa iji kwụsị ọ bụla 2 ka 3 awa ka Fido gbatịa ya ụkwụ.
DỊGHỊ ahapụ ha n'ụgbọala
Modern ụgbọala fọrọ nke nta ikuku esika na a Pita hapụrụ nanị na ụgbọ ala bụ na n'ihe ize ndụ nke agaghị na-ezuru ikuku, ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na okpomọkụ. Ọ bụ ezie na ikuku okpomọkụ bụ nanị 70 ogo a ụgbọala na anyanwụ nwere ike inwe nnọọ na-ekpo ọkụ.
N'abalị NA A ụlọ ndina
Olileanya ị gara ka Pet Njem web saịtị na gbaa akwụkwọ a Pita enyi na enyi nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ ndina online. Ọ bụrụ na ndị na họtel / ụlọ ndina ebubo a Pita ego ịkwụ ụgwọ ya, adịghị agbalị zoo gị Pita, unu ga-anọ n'abalị ahụ nile nchegbu banyere na-emepụta.
Mgbe ị na-abata na-arịọ maka n'ala ụlọ dị nso ebe ị pụrụ a ije na Fido. The center n'ogige bụghị nri ebe. Jide n'aka na bulie mgbe gị Pita mere na nkwari akụ / ụlọ ndina ga-anọgide na Pita enyi na enyi.
Ọtụtụ ụlọ ịjụ ị na-adịghị ahapụ Pita naanị n'ime ụlọ maka doro anya ihe mere. Ị nwere ike ịtụ wepụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ mma ezuru gị Pita a ga-ahapụ n'ime ụgbọ ala maka a ọkara awa ma ọ bụ otú ị pụrụ apụ na-nri abalị na-ewe ha tinyere. Ị pụrụ ọbụna ịhụ a Pita enyi na enyi ụlọ oriri na ọṅụṅụ, anya n'ihi na n'ebe na n'èzí aba ebe dị ka n'akụkụ ụzọ Americe II.
Unu rutere ị na-aga
Gosi gị Pita gburugburu ha n'ụlọ ọhụrụ, ebe i enịm nri ha, mmiri, na bed.
Ọ bụrụ na gị Pita bụ a cat, na-egosi ha na ọnọdụ nke kitty-awụba n'oké osimiri igbe. Fido ga-mkpa ama ebe ọ na-azọrọ na e-aga dị ka nke ọma.
Njikere ugbu a na-enwe ezumike na ụlọ ọrụ gị enyi kasị mma.
7 Atụmatụ N'ihi a lụwa
Ịchọta A Pet ekiri mgbe nile